Izindaba - Ukukhuphuka kwentengo yeCobalt kudlule okulindelwe noma kuzobuyela ezingeni elinengqondo
Kwikota yesibili ka-2020, inani eliphelele lokungenisa izinto zokusetshenziswa ze-cobalt kwakungamathani ayi-16800, ukwehla konyaka ngonyaka kwe-19%. Phakathi kwazo, inani eliphelele lokungeniswa kwensimbi ye-cobalt kwakungamathani ayi-0100 wamathani wensimbi, kanti ukwehla unyaka nonyaka kwehle ngama-92%; ukungeniswa okuphelele kwemikhiqizo emaphakathi ye-cobalt hydrometallurgy kwakungamathani ayi-15800 wamathani wensimbi, nokwehla konyaka okuyi-15%; inani eliphelele lokungeniswa kwe-cobalt eluhlaza kwakungamathani ayi-0800 wamathani wensimbi, ngokunyuka konyaka nonyaka ngama-57%.
Intengo ye-cobalt emakethe yasekhaya inyuke kakhulu. Kusukela maphakathi noJulayi, amanani entengo e-electrolytic cobalt, i-cobalt sulfate ne-cobalt chloride enyuke cishe ngo-10% - 11%, okungaphezulu kunaleso sangenyanga kaMeyi kaJuni. Ukukhuphuka kwentengo ye-electrolytic cobalt, i-cobalt sulfate ne-cobalt chloride kusuka ngoMeyi kuya kuJuni kumayelana no-3-4% kuphela.
Izinguquko zamanani emikhiqizo ye-SMM cobalt kusuka ngoMeyi 8 kuya kuJulayi 31, 2020
Ngemuva maphakathi noJuni, intengo ethile ye-electrolytic cobalt ku-cobalt sulfate kancane kancane ithambekele ku-1, ikakhulukazi ngenxa yesidingo sezinto zebhethri
Ukuqhathaniswa kwemikhiqizo ye-SMM cobalt kusuka ngoMeyi 8 kuya kuJulayi 31, 2020
Kusukela ngoMeyi kuya kuJuni kulo nyaka, okuwukuphela kwento exhasa ukukhuphuka kwentengo ukuvalwa kweNingizimu Afrika ngo-Ephreli, kanye nokushoda kwezinto zokusetshenziswa zasekhaya ze-cobalt kusukela ngoMeyi kuya kuJuni. Kodwa-ke, okuyisisekelo semikhiqizo yokuncibilikisa emakethe yasekhaya kusabaningi ngokweqile, i-cobalt sulfate yaqala ukuvela ngenyanga yesitoko, okuyisisekelo kwathuthukiswa. Izidingo ezisezansi azizange zithuthuke kakhulu, kwafakwa inani eliphakeme kakhulu le-3C yokufunwa kwedijithali ekuthengisweni kwangesikhathi sonyaka, ukukhuphuka kwentengo bekukuncane.
18650 uNimh, 3.7 Ibhethri elishajekayo, I-Lithium Ion Polymer Ibhethri, 12v Lithium Ion Ibhethri elishajekayo, Li Ibhethri, Iphakethe Lithium Battery Pack eyi-12 Volt, Yonke Imikhiqizo